Bluetooth problem on Windows 10 | Chan Myay Thu
နောက်ဆုံး Googling လုပ်ပြီး လိုက်မွှေကြည့်တော့ ကိုယ်တွေလို ဖြစ်တဲ့ သူတွေလည်း အများသား ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ အားမငယ်ရတော့ဘူးပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက် လျှောက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ အဖြေတစ်ခုရတယ်။ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ –
၁. BIOS Setting ထဲ ဝင်။ Bluetooth device ကို disable လုပ်
၂. Windows ထဲ ပြန်ဝင်။
၃. BIOS Setting ထဲ ဝင်။ Bluetooth device ကို Enable ပြန်လုပ်။ Windows ကို Restart ပြန်လုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့ရဲ့ Bluetooth device လေး ပြန်ပေါ်လာတယ်။
ကျွန်တော့လိုမျိုး ပြဿ နာရှိနေတဲ့ သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
← Chinese Keyboard တရုတ်လိုရိုက်မယ်